15 Desambra 2018 Tsy ambanin’ny lalàna isika fa ambanin’ny fahasoavana. - FJKM Québec - Canada
15 Desambra 2018
14 décembre 2018 by Njaka Ramanandafy
Fandalinana ny Boky 1 Samoela
SAMOELA VOALOHANY 24 : 1-23
24:1 Ary i Davida niakatra niala teo ka nitoetra tao amin’ny batery fiarovana tany En-Jedy.
24:2 Ary rehefa niverina avy nanenjika ny Filistina i Saoly, dia nisy nanambara taminy hoe: Indro, i Davida any an’efitr’i En-Jedy.
24:3 Ary i Saoly naka telo arivo lahy voafantina tamin’i Israely rehetra ka lasa nitady an’i Davida sy ny olony tany amin’ny vatolampin’ny osidia.
24:4 Ary tonga teo amin’ny valan’ondry tamoron-dalana izay nisy zohy izy, ka niditra tao i Saoly mba hiavela; nefa i Davida sy ny olony efa nipetraka tao anatin’ny zohy.
24:5 Ary hoy ny olon’i Davida taminy: Izao no andro nolazain’i Jehovah taminao hoe: Indro, hatolotro eo an-tananao ny fahavalonao hataonao araka izay sitrakao. Dia nitsangana i Davida ka nitsaitsaika nanapaka ny sisin’ny kapotin’i Saoly.
24:6 Nefa nony efa vita izany, dia namely an’i Davida ny eritreriny noho ny nanapahany ny sisin’ny kapotin’i Saoly,
24:7 ka hoy izy tamin’ny olony: Sanatria amiko eo anatrehan’i Jehovah, raha hanao izany zavatra izany amin’ny tompoko izay voahosotr’i Jehovah ka haninjitra ny tanako aminy, fa voahosotr’i Jehovah izy.
24:8 Dia nampijanona ny mpanompony tamin’ izany teny izany i Davida ka tsy namela azy hitsangana hamely an’i Saoly. Ary i Saoly nitsangana ka niala tao an-johy, dia nandeha tamin’izay nalehany.
24:9 Ary rehefa afaka izany, dia mba nitsangana koa i Davida ka niala tao an-johy koa, dia niantso an’i Saoly ka nanao hoe: Ry mpanjaka tompoko o! Ary nony nitodika azy i Saoly, dia niondrika tamin’ny tany i Davida ka niankohoka.
24:10 Ary hoy i Davida tamin’i Saoly: Nahoana ianao no maka vavan’olona hoe: Indro, i Davida mitady hanisy ratsy anao?
24:11 Indro, hitan’ny masonao androany ny nanoloran’i Jehovah anao ho eo an-tanako tao an-johy; ary nisy nilaza hevitra hamonoana anao, saingy niantra anao ny masoko, ka hoy izaho: Tsy haninjitra ny tanako amin’ny tompoko aho, fa voahosotr’i Jehovah izy.
24:12 Ary koa, ry ikaky o, jereo dia jereo ange ny sisin’ny kapotinao ety an-tanako; fa raha nanapaka ny sisin’ny kapotinao aho, fa tsy nahafaty anao, dia izahao ka fantaro fa tsy misy faharatsiana na fahadisoana amin’ny tanako, ary tsy nanota taminao aho, nefa ianao kosa mihaza ny aiko mba hahafaty azy.
24:13 Jehovah no hitsara ahy sy ianao, ary i Jehovah no hamaly anao noho ny amiko, fa ny tanako tsy mba haninona anao.
24:14 Araka ny lazain’ny ohabolan’ny ntaolo hoe: Avy amin’ny ratsy fanahy no ivoahan’ny ratsy, nefa ny tanako tsy haninona anao.
24:15 Hitady an’iza no nivoihan’ny mpanjakan’i Israely? Iza no enjehinao? Amboa maty; parasy iray.
24:16 Aoka i Jehovah no ho mpitsara, ka dia hitsara ahy sy ianao ary hijery sy handahatra ho ahy ka hanafaka ahy amin’ny tananao.
24:17 Ary nony vita izany teny nataon’i Davida tamin’i Saoly izany, dia hoy i Saoly: Feonao va izany, ry Davida zanako o? Ary i Saoly nanandratra ny feony ka nitomany;
24:18 ary hoy izy tamin’i Davida: Marina noho izaho ianao; fa ianao dia nanisy soa ahy, fa izaho kosa namaly ratsy anao.
24:19 Ary ianao dia naneho androany ny nanaovanao soa tamiko, fa na dia natolotr’i Jehovah teo an-tananao aza aho, dia tsy nahafaty ahy ianao.
24:20 Fa moa raha misy olona mahazo ny fahavalony, havelany handeha soa aman-tsara va izy? Koa hovalian’i Jehovah soa anie ianao noho ny nataonao tamiko androany.
24:21 Ary, indro, ankehitriny fantatro fa ho mpanjaka tokoa ianao, ary ny fanjakan’i Israely ho tafatoetra tsara eo an-tananao.
24:22 Koa mianiana amiko amin’i Jehovah ianao ankehitriny fa tsy handringana ny taranako mandimby ahy ianao, ary tsy hovonoinao amin’ny mpianakavin’ny raiko ny anarako.
24:23 Ary i Davida dia nianiana tamin’i Saoly; ary dia lasa nody i Saoly, fa i Davida sy ny olony kosa niakatra nankany amin’ny batery fiarovana.
Tsy ambanin’ny lalàna isika fa ambanin’ny fahasoavana (Rom 6.14)
1-Tsy fandringanana no làlana fa fitaizana (Gal 3.24).
Omen’ny lalàna fahefana hamono fahavalo isika fa tsy hamono olona(Eks 20.13), izany hoe: raran’ Andriamanitra ny mandatsa-drà fa aina izany (Lev 17.10-11) fa ny fahotana iainan’ny olona no fahavalo.Eto dia ny fankahalana io fahotana io. Tsy i Saoly olom-boahosotra akory no fahavalo niadian’i Davida fa ny fankahalana nameno ny fony no nanitsian’i Davida azy (and10-23).Raha samy miezaka mampihatra sy miaina ny lalàna ny sokajin’olona rehetra dia ho foana miandalana ny ratsy sy loza samihafa.
2-Aza mitsara alohan’ Andriamanitra momba ny olom-boahosony
Tsy maintsy handalo ny fitsaran’ Andriamanitra avokoa na iza na iza . Maika alohan’ny Tompon’ny fiantsoana anefa ny mpino sasany ka maninjitra ny tànany hamely ny mpitondra fiangonana . Tsarovy ny tenin’i Davida eto (and7).Ny mpitondra fivavahana rehetra kosa, mbamin’ireo lohany eo amin’ny fiangonana dia aoka tsy hametraka vato manafitohina ny mino noho ny fitondrantenany fa hahay hanaja tena hiala rehefa misy fahadisoana natao.